Worldwa ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Are nọ n’ọnọdụ amara mgbe nile ebe ihe nile dị mma.
Ihe kaadị pụtara "ụwa"
La Chaatị ụwa na-arụtụ aka n'amamihe onye isi ala nke na-akwado ndụ na nke a na n’ime ụwa niile. N'ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri Tarot, ọ bụru ụnwanyi nke ghọworo ihe nlere anya nke ụwa. O sitere na Omenala Hibru, Gnostic na alchemical, na-achọta n'etiti eluigwe na uwa dika nne nke nkpuru obi, nwunye nke Chukwu, na onye n'echebe anyị ike karmic nke anyị weputara n'uwa n'emeghị ka anyị.
Akwụkwọ ozi nke chi nwanyị nke ụwa na-akpọ anyị òkù ka anyị bụrụ ụmụ amaala ụwa - otu mgbe anyị matara ikike nke mkpụrụ obi anyị maka ya. Ọ na-ekwupụta edemede nke anwụghị anwụ nke mkpụrụ obi, nke emere na-enweghị mkpa ịnwụ.
Akwụkwọ ozi a, dị ka Anyanwu, a na-eche na ọ nweghị ihe ọjọọ ọ pụtara n'agbanyeghị ebe ma ọ bụ ka ọ si apụta. Ọ bụrụ na asusu a na -akpọ hermetic bụ "Mara onwe gị," onyonyo a na -anọchite anya ihe amaara mgbe a na -agbaso ezi ọdịdị nke onwe na nnwere onwe okike na mmezu ikpeazụ.
Nwee obi iru ala n’ịmara na ị na-enwe ihe ịga nke ọma n’ihe ị chọrọ.
Enwere ike leta El Mundo te na-enye ikike ime ihe ị chọrọ. Ugbu a, mkpali gị dị nso na uche nke Chineke. Ọbụna ma ọ bụrụ na i mehiere, ọ ga-abawanye uru. Na-arụsi ọrụ ike ma na-aga n'ihu.
Ọ dịghị mkpa ka ị nọgide na-achọpụta ma ọ bụ na-egbochi gị spontaneity na ngụkọta oge. Kama ịchọ nkwenye ma ọ bụ nkwenye nke ndị ọzọ, gbaa egwu ahụ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, kwupụta echiche gị, meghachi omume n’ụzọ ebumpụta ụwa, ma hapụ ibe ka ọ daa ebe ha nwere ike.
Ihe dị mkpa bụ nzube Chineke. Ma ndi mmadu kwadoro ya ma obu na ha adighi mkpa. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị kwe ka ego gị bulite, ị gaghịzi aba uru na atụmatụ ka ukwuu.